chiredzo mhando pena nenyunje muchina - China Qingdao Antai Heavy Industry
Qingdao ANTAI haka (Chakabva hen'a) mhando kupfurwa nenyunje muchina dzinowanzotsigi- kushandiswa duku michina, akadai, Aluminum kufa-Kudzingwa, Magnesium castings, duku simbi fabrications, marimu / mavhiri, rachulis uye kwesayenzi kurapa. Medium/Large machines, such as, forges, foundries, steel structures, gears, heat treatments, electric transformers etc.
Qingdao ANTAI haka (Chakabva hen'a) mhando kupfurwa nenyunje muchina dzinowanzotsigi- kushandiswa duku michina: Aluminum vanofa-Kudzingwa, Magnesium castings, duku simbi fabrications, marimu / mavhiri, rachulis uye kwesayenzi kurapa. Medium / michina Large: kunoita, foundries, simbi zvivako, rachulis, kupisa mishonga, dzemagetsi transformers etc.
Qingdao ANTAI haka (Chakabva hen'a) kutaipa kupfurwa nenyunje muchina zvakagadzirirwa kuchenesa zvikamu yakarembera kubva panhongonya conveyor uye raishandiswa castings kana makuru nhengo zvisingagoni akadonha. Tinopa mazano akasiyana-siyana kusanganisira aibuda-kuburikidza, Y-njanji, chinopfuurira kana mu-mutsetse kwebhosvo mazano. Vamwe zvakanakira kuti mazano edu zvinosanganisira: yakaderera musoro mukamuri waida, pasi kwokutanga mubhizimisi, kwakakwana Nokufema nhau pasina kukuvadza nhengo.
Qingdao ANTAI haka (Chakabva hen'a) kutaipa kupfurwa nenyunje muchina muri zvivako pamwe operative mukana wokushandiswa, yakakodzera nokuti mifananidzo yakawanda basa. Kuwanda michina iri rakafara chaizvo, saka zviri nyore kuziva zvikuru rakakodzera muchina upi vanoshayiwa. The kutoitwa musimboti ndiye mumwe yakarembera basa-zvidimbu (singly kana pamwe). Chirauro Zara uye rotates mukati muchina kufumurwa zvose pemvura basa zvidimbu kusvika hasha chiito kubva mavhiri, akaiswa kurutivi Nokufema yomukati.
Kunze kukura bara kwebhosvo kamuri, mashandiro michina izvi ndiwo vachizvitakudza zvokukochekera nazvo.
Size basa chidimbu vakachenesa
Wheel uzvirasire chinzvimbo
3D yokukweva Hook mhando akapfura nenyunje muchina
Nenyunje cabinet mashoko
Nenyunje mukamuri inopisa mapazi anoshandisa 10mm ukobvu inopisa anokungurutsirwa simbi yairema Mn13 giredhi ,mamwe mapazi unodzivirira liner kushandiswa 8mm ukobvu giredhi 65Mn simbi ndiro. Kukanda nzungu ngadzirambe dziri liner.
Spare mativi bara nenyunje muchina
Tine refu pamwe nenhumbi fekitari, cheap mutengo, kutsanya pakukurukura nguva, unhu hwakanaka.
The rokuchenesa kunyatsoshanda kuti haka mhando akapfura nenyunje muchina
Ose simbi inogona kutsvaira nokuda haka mhando akapfura nenyunje muchina
Sewevhu, nokuchengetedza zvikamu, vachikanda zvikamu, bogie, marimu, mavhiri etc.
Chokuendesa haka mhando akapfura nenyunje muchina
fekitari yedu zvaMambo haka mhando akapfura nenyunje muchina
Isu aivigirwa yedu bara nenyunje muchina kunyika dzinopfuura 30, akadai, Russia, Indonesia, Australia, India etc.
Kana ukashanyira fekitari yedu, unogona kutarisa muchina mu mufekitari vedu vatengi pedyo fekitari yedu.
Kana muchina haasi yakanakira workpiece yenyu, tapota vanotiudza zvinotevera mashoko:
326 bara nenyunje Machine
Apron bara nenyunje Machine
Apron Type bara rikavapo Machine
Automatic Plate pena nenyunje Machine
Automatic Steel Plate pena nenyunje Machine
Belt bara nenyunje Machine
Belt Type pena nenyunje Machine
Continous Feed Tunnel Type Mesh Belt vakapfura nenyunje Machine For Metallic Parts
Conveyor Belt akapfura rikavapo Machine
Crawler bara nenyunje Machine
Drum pena nenyunje Machine
Drum Type bara rikavapo Machine
Metal Apron bara nenyunje Machine
Plate pena nenyunje Equipment
Plate pena nenyunje Machine Price
Qxy2500 bara nenyunje Machine
Roller Conveyor Pararira Type pena nenyunje Machine For Sheets / Plates
Rolling Drum bara nenyunje Machine
bara Blast Machine With Rubber Belt
Akapfura nenyunje Machine For Die Cast Parts
Akapfura nenyunje Machine For Steel Plate
Akapfura nenyunje Machine For Wire petsvimbo
Bara nenyunje Plate
Shotblasting Machine For Building zvinhu
Steel Plate bara Blast Machine
Steel Plate pena Blastin
Steel Plate pena nenyunje And Painting Line
Steel Plate pena nenyunje Equipment
Steel Plate pena nenyunje Machine Machinery
Steel Plate pena nenyunje Painting Machine
Tumbling Rubber Belt bara nenyunje Machine
Tumling Steel Belt akapfura nenyunje Machine